Vodafone sy Disney dia handefa smartwatch ho an'ny ankizy amin'ny Krismasy | Androidsis
Vodafone naka tehina be dia be izy io rehefa nanambara i Disney + fa hiaraka amin'i Movistar + irery izy io. Tsy nanaiky mihitsy ilay mpandraharaha anglisy, ary toa nahita fomba hanaovana fihavanana amin'ny mpanjifany ilay goavambe fialamboly. Ahoana? Miasa amin'ny famantaranandro marani-tsaina ho an'ny ankizy izay ho tonga amin'ny Krismasy ho avy izao.
Amin'izao fotoana izao dia tsy manana antsipirian'ny teknikan'ilay fitaovana izahay, fa Vodafone dia nanamafy tamin'ny alàlan'ny fanambarana an-gazety fa ity smartwatch Disney ity dia hanana fitaovana noforonina manokana ho an'ny ankizy, ankoatry ny fifandraisana finday. Ary eny, ireo endri-tsoratra malaza indrindra eo amin'ny tontolon'i Disney no ho mpilalao fototra.
Ity no smartwatch ho an'ny ankizy avy any Vodafone sy Disney
Ny hevitra dia ity smartwatch ity dia mahatratra ireo magazay eo afovoan'ny vanim-potoanan'ny Noely, amin'ny tanjona ny hikorontana ny isan'ny varotra faran'izay betsaka azo atao. Efa nilaza taminay izahay fa tsy nanome data momba ny toetra teknika ny orinasa, saingy misy antsipiriany fantatray. Ohatra, izy mpamorona endrika Yves Behar no hiandraikitra ny famoronana ny endrik'ity fitaovana ity. Ho fanampin'izay, ny ekipa Vodafone Smart Tech dia hiandraikitra ny fanolorana traikefa ho an'ny mpampiasa mifanaraka amin'ny antenaina.
Araka ny efa nampoizina tamin'ity fitaovana ity, ity smartwatch ho an'ny ankizy avy any Vodafone sy Disney ity dia hanana GPS mifangaro, mba hahafantarantsika amin'ny fotoana rehetra misy ny zanatsika, ary koa ny bokotra fanairana sy ny fampiasa hafa. Ny vidiny? Mistery iray manontolo izany, saingy azo antoka fa tsy ho ela dia hanana antsipiriany bebe kokoa isika.
Na dia izany aza, ny hevitra hahafahana mividy smartwatch Disney ho an'ny zanatsika, ary ahafahana manara-maso azy ireo hahatsapa ho azo antoka kokoa, dia antsipiriany iray tokony horesahina. Ary i Vodafone dia manana maodely roa toa izao ao amin'ny katalaoginy, noho izany dia afaka manome toky anao izahay fa tsy ho diso ny kalitao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Vodafone sy Disney dia manambatra hery: handefa smartwatch ho an'ny Krismasy izy ireo
Izahay dia mizaha toetra ny vokatra vaovaon'i Huawei ao amin'ny "trano mahira-tsaina" anao